कुलमान घिसिङ अहिले फेरि एकपटक चर्चामा छन् । उनको आँशु, रोदन र भक्कानो चर्चामा छ । कुलमानको यो रोदनभित्र मुलुकको आशा भरोसा अनि विकृति र कुण्ठा पनि सँगसँगै चर्चामा छ । कुलमानले भारतबाट एलइडी बल्ब खरिद गर्दा राष्ट्रघात गरेको र कमिसन खाएको हो कि हैन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै चर्चामा छ । देशले पहिले पनि कुलमानलार्इ रूवाएको थियो, मंगलबार फेरि एकपटक उनलार्इ रूवाएको छ ।
आखिर कुलमान को हुन् ? उनले जीवनमा कसरी प्रगति गरे ? के के हण्डरहरू खाए ? अनलाइनखबरले गत मंसिरमा प्रकाशित गरेको सामाग्री पुनः एकपटक सान्दर्भिक हुने ठानेर यहाँ दोहोर्‍याएका छौं-
बेथानको ‘ध्वाँसो’ देखि काठमाडौंको लोडसेडिङसम्म
अहिले काठमाडौंलाई लोडसेडिङ मुक्त गराएर चर्चा कमाएमा कुलमान भन्छन्- ‘मैले काठमाडौं आएपछि नै हो, बिजुली देखेको ।’ विद्यालयमा सधैं प्रथम हुने कुलमानले जब काठमाडौंमा आएर बिजुली देखे, तब उनले कसम खाए- मेरो बेथान गाउँमा पनि यसैगरी बिजुली बाल्छु । अहिले उनले बेथानमा बिजुली बालिसकेका छन् । र, बेथानमात्रै हैन, देशैभरि उज्यालो बनाउने अभियन्ता बनेका छन् उनी ।
कुलमानको प्राथमिक शिक्षा गाउँमै वित्यो । उनी सधैं स्कुल फस्ट हुन्थे । ५ कक्षा पास गरेपछि उनी दाइहरुसँग काठमाडौं आए । उनका दाजु बानेश्वरमा बस्थे र थान्काको व्यवसाय गर्थे ।
काठमाडौं आएपछि कुलमानलाई उनका दाजुहरुले झोंछेको सरकारी स्कुल बालसेवा माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ मा भर्ना गरिदिए । कुलमान त्यहाँ पनि प्रथम नै भए ।
कुलमानले हाँस्दै भने- मेरो मेहनत हो ।’
उनले नेपालको लगानीबाट पनि विद्युत परियोजना सफल रुपमा बनाउन सकिन्छ भनेर प्रमाणित गरे, जुन उनको आफ्नो व्यक्तिगत करिअरका लागि टर्निङ प्वाइन्ट बन्यो
एसएलसीमा धेरैले कुलमान बोर्डमा पर्ने आश गरेका थिए । उनका सेकेण्ड ब्वाइ महेश ढकाल भने बोर्डमा परे । तर, कुलमानको ४ नम्बर पुगेन । त्यसपछि उनले अस्कल क्यापसबाट आईएस्सी गरे ।
त्यसपछि उनी छात्रवृत्तिमा भारतमा पढ्न गए । जम्सेदपुरबाट सन् १९९४ मा बीएस्सी इलेक्टिकल इन्जिनियर गरेपछि करिव ०५१ तिर उनी स्वदेश फर्केर नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा सातौं तहको इन्जिनियरको जागिरे भए ।
काम गर्दै पढ्ने क्रममा पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसबाट पावर सिस्टम इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे ।
कुलमान भन्छन्-मैले त्यसबेलै पूर्वानुमान गरेको थिएँ कि सन् २००५ बाट लोडसेडिङ हुन्छ, त्यही भइरहेको छ ।’
प्राधिकरणमा लामो समय काम गरेपछि नीतिगत तहमा जाने इच्छा पनि नजागेको होइन । केही समय एक सहसचिवका लागि लोकसेवाले खोलेको विज्ञापनमा लिखितमा नाम पनि निकाले ।
तर, अन्तरवार्तामा अर्कै छानिए । ‘त्यो बेला सहसचिव भएको भए म पनि सचिव भइसक्थें होला,’ उनी हाँस्दै भन्छन् ।